PSG အသင်း: အကိုစတင်Mbappéအပေါ် bluffing မှစ. - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ • စာမျက်နှာတိုင်း • အာဖရိကဖိထားပါ • အားကစားများ "PSG အသင်း: အကိုစတင်Mbappéအပေါ် bluffing မှစ.
PSG အသင်း: အကိုစတင်Mbappéအပေါ် bluffing မှစ.
default site ကို 22 မေလ 2019
စိတ်ပျက်စရာရာသီ၏အောင်မြင်မှုများနှင့်လျင်မြန်စွာအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့တိုက်တွန်းအကြားတစ်ဦး shared ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Dijon (4-0) ဆန့်ကျင်အနိုင်ရရှိပြီးနောက်စနေနေ့ညဉ့်တွင် Parc des မှူးမတ်မှာဆုညနပေိုငျး၏ထူးဆန်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးနောက် အရာ, ခေါင်းဆောင်များ PSG အသင်း ဆက်ဆက်အခက်ခဲဆုံးနေထိုင်ခဲ့ကြမှစဉ်းစားမိတယ်။
ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ မှလွဲ. နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင် PSG အသင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြား, Shit, ကလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ပျံ။ အခမ်းအနားသူ့ကိုအကောင်းဆုံးကစားသမား၏အပါအဝင်နှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆု, စပါးကျန်ကိုကောက်မမြင်စဖူးရသော UNFP, trophies ပြီးနောက်ထို့ကွောငျ့တနင်္ဂနွေညဥ့် Kylian Mbappéနေဖြင့်ဖြန့်ချိငယ်မီဒီယာဗုံးပေါ်ရေတွက်မခံခဲ့ရ ရာသီ 1 လိဂ်။
ရင်းမြစ်: https://www.20minutes.fr/sport/football/2522343-20190520-psg-bluffes-mbappe-comment-comprendre-folle-sortie-mediatique-joueur-apres-trophees-unfp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign= အားကစား
အိန္ဒိယ: ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနခရီးသွားဧည့် SCO ကူညီရန်ဇွန်လကုန်ကရုရှား interface ကိုရပါလိမ့်မယ်: Swaraj | အိန္ဒိယသတင်း
အန္တရာယ် Gladbach thorgan ဒေါ့မွန်နိမိတ်လက္ခဏာ